मेलम्चीको सपना र विगत १२ वर्षको प्रयास - Aarthik Sanjal
आर्थिक सञ्जाल	काठमाडाैं	चैत १५, २०७७
काठमाडौं उपत्यका बासीको तीस वर्षदेखिको सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीको पानी पिउने सपना मेलम्ची खानेपानी आयोजना शुरू भएको १२ वर्षपछि २०७७ चैत्र १५ गते अपरान्ह २बजे पूरा भएको छ। मेलम्चीको पानी गत फागुन २२ गते काठमाडौको सुन्दरीजलमा २६।७ किमि लामो सुरूङ निर्माण गरि खसाइएको थियो ।
चैत्र १५ गतेबाट महाँकाल,अनामनगर,बत्तिसपुतली,एयरपोर्ट हाइट,कालोपुल क्षेत्रमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न शुरु गरीएको छ। चैत्र १५ गते दिउँसो २ बजे काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं.६ महाँकालचौरमा रहेको ट्याङ्कीको भल्भ खोलेर पानी वितरण सुरु गरिएको छ ।
मेलम्चीको सुरुङ, सुन्दरीजलस्थित पानी पोखरी प्रशोधन केन्द्र, चक्रपथमा बिच्छ्याइएको थोक वितरण पाइपलाइनहरुको सफल परीक्षण पश्चात काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पानी वितरण गरेको छ।
बिच्छ्याइएको थोक वितरण पाइप–लाइनहरुको सफल परीक्षण पश्चात महाँकालचौरको ट्याङ्कीमा पानी आइपुगेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले जनाएको छ । उक्त पानी गत आइतबार दिउँसोदेखि नै चावहिल, महाँकालचौर क्षेत्रमा वितरण गरिएको थियो । चैत्र १५ र १६ गते दिनभरिमा ४ करोड लिटर पानी महाँकालचौर, अनामनगर, मीनभवन र खुमलटारस्थित पोखरीहरुमा जम्मा हुने योजना रहेको छ ।
त्यसपछि ४ दिन ६ करोड लिटर र त्यसपछि १७ करोड लिटर मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौ उपत्यकाबासीलाई वितरण गर्ने योजना रहेको छ। मेलम्ची आयोजना शुरू भएको १२ वर्षमा २६.७ किमि सुरूङ खनेर काठमाडौमा मेलम्चीको पानी खसाउन सक्नु ठुलो उपलव्धी हो। तीस वर्षको सपना काम शुरू भएको १२ वर्षमा पूरा भएको छ । यो नेपालको विकासमा ठुलो सफलता हो,प्रविधिमा ठुलो फडको हो।
चीनको थ्री गोर्जेज बाँध सन् यात्सेनले सन् १९१२ मा नै बनाउन खोजेका थिए । तर यथार्थमा उक्त बाँध एक शताब्दीपछि सन् २०१२ मा मात्र बन्न सफल भयो । भारतले दिल्लीको खानेपानीको आपूर्ति गर्न टेहरी बाँध सन् १९६१ देखि नै बनाउन खोजेको थियो ।
तर बल्ल बल्ल सन् २००६ मा आएर सम्पन्न भयो । टेहरी बाँधले ३०० किलोमिटर टाढाको दिल्ली महानगरको लागि खानेपानी पनि आपूर्ति गर्छ । यी आयोजनाहरुको बारेमा कुरा गर्दा हामी कोही पनि १०० वर्ष , ६० वर्षपछि बने भनेर भन्दैनौं ।
चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने आशा गरिएको अष्ट्रेलियाको सिड्नी ओपेरा हाँउस चौंध वर्ष र १४०० प्रतिशत बढी रकम (भेरिएसन) खर्च गरेर मात्र सम्पन्न भएको थियो । अहिले उक्त हाँउस विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको छ । अष्ट्रेलियाको लागि बाँकी विश्वलाई देखाउने साधन बनेको छ । ठूला आयोजनाहरुको लागि त्यस्तै ठूलो मन पनि चाहिन्छ ।
हाम्रो देशमा मेलम्ची आयोजनाले सुरुङ्ग खन्न शुरु गरेको वि.स. २०६६ वैसाख २० गतेदेखि हो । जटिल भूबनोट र गरिब सामाजिक आर्थिक संरचनाहरु भएको देशले २६.७ किलोमिटर सुरुङ्ग सहित अन्य थुप्रै जायज र नाजायज मागहरु पुरा गर्दै करिब १२ वर्षमा काठमाण्डौवासीलाई खानेपानी दिन सफल भएको छ ।
तर किन हो हामीलाई वि.स. २०४७ देखि गणना गरेर मेलम्ची ३१ वर्षमा सम्पन्न भयो भन्न गर्व लागे जस्तो गरिरहेका छौं । वातावरणीय अध्ययन स्विकृत भएको आयोजनाको लागि रुख काट्न अनुमति दिन मात्र ३(४ वर्ष लाग्ने देशमा, वार्ह वर्षमा यति ठूलो (मेगा) प्रोजेक्ट बन्दा पनि हामी किन खुशी हुन नसकेको हो ?
सामान्यतया विकास आयोजनाहरुबाट नकारात्मक रुपमा प्रभावित (जस्तोः आयोजनाको कारण विस्थापित, जग्गा अधिग्रहण, बसाइ सराई, आदी) भएका जनताहरुले आयोजनाको विरोध गर्ने चलन त विश्वभरी नै छ । त्यो जायज पनि देखिन्छ ।
तर आयोजनाको कारण सबैभन्दा बढी फाइदा लिनेहरुले नै आयोजनाको विरोध गर्ने प्रचलन भने नेपालको जस्तो अन्य कतै देखिदैन । मेरो व्यक्तिगत भोगाइ पनि त्यस्तै रहेको छ ।
यहाँ सबैभन्दा बढी विजुली बाल्नेहरुले विद्युत आयोजनाको, कारविना भित्र बाहिर गर्न नसक्नेले सडकको र जमिनदारले सिंचाईको धुँवादार विरोध गरेको देखिन्छ । मेलम्चीमा पनि पानी पाउनेहरुले नै आयोजनाको सबैभन्दा बढी विरोध र खिसिट्युउरी गरेको देखिन्छ ।
अनेकौं चुनौतिहरुको बाबजुद पनि नेपालको एउटा मेगा प्रोजेक्टलाई सम्पन्न गर्न योगदान गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई हृदयैदेखिको सम्मान गर्नु पर्दछ । यो सफलताले बढाएको देशको र जनशक्तिको आत्मविश्वासको पनि उच्च सम्मान गर्नु पर्दछ।
१५ चैत २०७७, आइतवार २०:३९ बजे प्रकाशित
काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु
स्वास्थ्य सामग्री लिन बेइजिङ उड्यो नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी–३३० जहाज